Abuur gawaarida AutoCAD oo u dir Google Earth - Geofumadas
Abuuraan farta "AutoCAD" kuna soo dir Google Earth
Maarso, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, topografia
In this post waxaan ka dhigi doonaa geedi socodka soo socda: In la abuuro file cusub, dhibcood dejinta ka file ah ee Excel xilli buuxa, abuuro geesoolayaasha ah, u yeelaan georeference, u soo dir Google Earth iyo keenaan image ee Google Earth in AutoCAD
Markii hore waxaan aragnaa qaar ka mid ah kuwan dacwadaha haddii ay taasi ku socdaan waxaan ku arki doonaa AutoCAD Civil 3D 2008 ... tusaale cad u ah sida uu u qoondeeyey waxa mar ahaa Civil Sourvey (Softdesk / COGO) iyo AutoCAD Map; Halkaa marka ay marayso ka version Civil 2008D 3 ka mid ah labada, taasoo wax ka qaban kara georeferences oo xiriir ah in ay Google Earth.
Si aad u bilowdo, faylka cusub ayaa la abuuraa, adoo isticmaalaya sheybaarka mitirka.
1 Soo dejinta dhibcaha Excel
Tani waa wax la mid ah sida Softdesk, iyadoo faa'iido ah fududaynta iyo soo bandhigay awood waa soo hagaagtay. file aan la sara kiciyey la saldhiga a total, oo halkaas ka aannu dhoofiyo hakad Kala (CSV) taas oo ah qaab ah in Excel furan kartaa qoraalka.
Si loo keeno dhibco ayaa la sameeyaa «dhibco / dhibco / soo dejin dhibco»Kadib waxaan dooranaa qaabka, kiiskan PNEZD (jimicsi ayaa la mamnuucay), taas oo macnaheedu yahay in dhibcooyinka ay yihiin: Point, waqooyiga (Iskuxirka Y), Bariga (Iskuxidhka X), Iskudarka (Isku-duwidda Z) iyo Sharaxaad.
Marka la galo, dhibcaha waxaa lagu soo bandhigi karaa gudiga bidix iyada oo la socota isuduwidda UTM.
2. Abuuri tartanka
Si loo abuuro xaglaha, waxaan u adeegsan karnaa jaleecada (boobka), oo tilmaamaya inaan rabno inaan ka soo qaadno iskudhafyada dhibcaha lambarrada ah, tan waxaan ku qori karnaa bararka taliska pn, ka dibna geli.
Kadibna nidaamka wuxuu na weydiistaa kala duwanaanta dhibcaha, waanna qoraynaa 1-108, taas oo ah tan ugu horeysa ee 108 ... oo diyaar u ah, tikidhka ayaa la qaadaa.
3. Abuuri qaybta
Illaa iyo hadda ma hayno xog-ururin, laakiin duuf fudud.
Si loo abuuro qisada sidii aan sameyn lahayn «jajabyada / abuurka qashinka walxaha«. Golaha la soo bandhigay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad doorato shaxda ay ku xirnaan doonto, waxaan dooran doonaa «hantida«, Macluumaadka Centroid ayaa lagu keydin doonaa«c-prop»Oo soohdintii waxay ahayd«c-prop-line»
Guddidu waxay sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan dooranno qoraalka qoraalka lagu dari doono qisada, oo ah isku-xirnaanta centroid-ka; Waxaan dooran doonaa magaca qisada, aagga iyo wareega. Kadibna waxaan sameyneynaa "ok"
4 Kala saar saadaalinta
Hada waa isku-duwaha aan u baahannahay in lagu qeexo gudaha a UTM (sida waan sameynay oo leh Manifold), taas oo micnaheedu tahay inaad ku meelaynayso nidaam qiyaasid ah iyo tixraac tixraac ah.
Tani waxaa lagu sameeyaa badhanka midigta sawir, ka dibna xulo «edig sameynta sawirada«.
Halkaas ayaan ku dooranayaa «unugyada iyo aagga,, Waxaan u dooranaa cutub metrik, iyo darajo sidii cutubyo dhexdhexaad ah (shahaadooyinka). Kadib waxaan u xilsaarnaa aaladda UTM, Civil 3D waxay noo oggolaaneysaa inaan dooranno waddanka, kiiskan waxaan ku meelaynaa «USA, Maamuln »maxaa yeelay qorshuhu wuxuu ku yaal Puerto Rico ka dibna Datum. Xaaladdan oo kale waxaan u xilsaarnaa WGS84, oo noqon lahayd NAD83 Puerto Rico.
5 U dir Google Earth
Si aan ugu dirno Google Earth, waxaan adeegsannaa saaxirka shaqeynaya «faylka / daabacaan Google Earth«.
Gudigaan sharaxa waxaa lagu xushay, iskuduwaha nidaamka hadii aan horey loo qeexin, magaca faylka ah ee loo yaqaan 'kmz' marki ay diyaar ahaatana,daabacaan«.
Marka faylka loo yaqaan 'kmz file' la sameeyo, waxaa lagu daawan karaa Google Earth oo leh «view»
6 Keen Google Earth orthophoto si AutoCAD
Waan sharxay boosteejo kale, laakiin asal ahaan waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo «faylka / soo dejinta / soo dejinta sawirka Google Earth«.
Ha ku sameynin AutoCAD iyo Excel waxa AutoCAD 3D ay sameyneyso ... Dabcan, waa inaad u baahan tahay bixiso waxa ay u qalantaa, inkasta oo ay jiraan waxyaabo ka dhigaya mid waxtar leh PlexEarth iyo had iyo jeer ku saabsan AutoCAD
Via: AUGI, Mexico, Central America iyo Kariibiyaanka, waxaad arki kartaa fiidiyowga nidaamkaan haddii aad isdiiwaangaliso.
Map-ka AutoCAD 3D Dwg Google Earth GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Tareenada waqtiga-dhabta ah ee GPS-ga
Post Next Create a tilmaamaha box iyo masaafo ka wadataa UTMNext »
18 Jawaab in ay "Create a pollygon in AutoCAD oo u dir Google Earth"
Roberto beeraha isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2020 at
como puedo pegar un plano en dwg en un archivo a kmz
nacas isagu wuxuu leeyahay:
martin velazque ... kaliya waxaad eegtaa bararkaaga muraayada waxaa jira ikhtiyaarka wax soo saarka ama soo saarida ... xayawaanka rayidka ah
Armando Julian isagu wuxuu leeyahay:
Waa arrin aad u xiiso leh shaqsiyadayda muddo toban sano ah ka shaqaynaysay waxaan jeclaan lahaa in aan wax badan barto
Si aad u sameeya kuwa idin mashquulin barnaamijka Plex.Earth ah, oo aad kala soo bixi kartaa quruxsan dhibcood mesh Google Earth, oo waxaad ka samaysaa khadadka dusha.
juan alberto isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan waxaan ubaahanahay inaan ogaado sida looga helo kabaha Google Earth iyo haddii loo dhoofin karo autocad ama rayidka 3d, sida iyo sida loo hubiyo isuduweyaasheyda laga helay garoonka oo leh muuqaalka lagu sharaxay Google Earth mahadsanid emailkeygu juveri1717@hotmail.com waad mahadsan tihiin waxaan ka imid Peru
WAXYAALAHA WAXAY KU HELI KARAA TALO BISHAAN WAXAAN U BAAHAN YAHAY QORSHE
martin velazque isagu wuxuu leeyahay:
Hi, tani waa mid aad u fiican, laakiin fadlan ii sheeg sida aan ugu sameeyo AutoCAD Civil 3D 2112, maadaama tallaabada ugu dambeysa ee faylka / daabacaadda aysan i siinin ikhtiyaarka Google Earth, waan kugu mahadnaqayaa, mahadsanid iyo salaan ka timid Mexico.
Waxaan ka helaa xiiso, taageeradaada. Waxaan ahay dukumiinti ku jirta madaniga, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo arko xNUMXD
hevert isagu wuxuu leeyahay:
http://cahuin.design.officelive.com Tani waa websaydhkeyga, waad ku mahadsan tahay, waxaan rajeynayaa in booqashadiina mid idinka mid ah, Waxaan sidoo kale leeyahay shirkad yar oo aabbahay ah oo adeegyo ku siisa Geomatics, GPS, iyo wax kasta oo la xiriira xirfadda, waxaan adeegyo ku bixinnaa Latin America oo dhan, Waad ku mahadsan tahay. oo xusuusnow inay ku farxi doonto inaad ka soo qeybgasho su'aalahaaga iyo websaydhkayga yar, waxaan ku dhiirrigelinayaa, waad booqan kartaa oo waxaad qori kartaa su'aalahaaga mahadsanid .. Hevert Cahuin H.
Waad salaaman tahay magacaygu waa Hevert Waxaan ku dhashay Peru, laakiin waxaan ka shaqeeyaa Dom. Dom. Waxaan ahay Calculist, Cadista, ugu dambayn waxaan ka shaqeeyaa waxoogaa yar oo Geomatik ah iyo waxyaabo kale oo laxiriira waxaanan kuu sheegi karaa inay jiraan habab badan oo looga gudbo polygons-ka caadiga ah iyo kuwa caadiga ah, iyada oo la tixgelinayo in sawirku yahay juquraafi ahaan, waxaad ka heli kartaa liis dhibco oo aad ku qori kartaa awoodda khariidadda, waxaad sidoo kale ku samayn kartaa Khariidadda Isha, waxaadna u dhoofisaa Google Earth, iyo sidoo kale inaad uga dhoofiso Google Earth, waxaad ku keydisaa sawirka qaab ahaan JPG oo aad ku soo dhoofsato Autocad, la soco inaad lahaato halbeega isugeynta ee dhulka Google oo aad la qabsato cabirkaas oo ku yaal Autocad, way fududahay, haddii aad rabto wax su'aalo ah ama su'aalo waxaad igu qori kartaa websaydhkeyga weli waan naqshadaynayaa emaylkayga Hebert_311@hotmail.com, waxaad ka hubin kartaa khadka tooska ah. waad mahadsan tahay waana ku farxi doontaa inay ku caawiso
Alejandro, miyaad la shaqeyneysaa mashiinka AutoCAD ama 3D Madani?
Tani looma dhigi karo oo kaliya kaliya AutoCAD caadi ah
Casharradan waa mid xiiso leh, waxaan jeclaan lahaa inaad i hagtaan sida loogu beddelo dhibcaha UTM-yada isku-xidhka juquraafi ahaan, markii aan u soo dejiyo polygon Google, waxay aadaa goob kale oo aan ku jirin meesha u dhiganta.
Fadlan waxaan u baahanahay si degdeg ah. kiis kastoo iigu soo diri karo emailkayga talaabooyinka la raacayo.
Horey u mahadcelin
Runtu waxay tahay inaanan si fiican u fahmin, macalinkeyga, Kiere, waxaan ku dari karnaa jaantus joometri laakiin dhinacyo badan iyo xagal mana fahmin hadii ay i caawin karaan ………… ..
haddii aad rabto inaad ku qorto si aad u ogaato warka, waxaad ku samayn kartaa akhristaha iyo Google Reader, markaa waxaad ka warqabtaa bogga cusub ee boggan
si aad u qorto waxaad ku sameyso xiriirkaan
Haddii kale, waxaad bogga ku dari kartaa shabakadaada ugu dambeysa
Hello Jose, maxaad ula jeedaa inaad noqoto xubin?
Waxaan rabaa inaan noqdo xubin ka mid ah boggan sidaan sameeyo
diyaar u ah, waxaan u dirnaa boostada, salaan
JUAN FLORES GARNICA isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ahay Topographer a Bolivia, Waxaan u arkay inay xiiso ii leedahay inaan barto tillaabooyinka abuurista polygon ee AutoCAD oo aan u aado Google Earth, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiisto raalli iga ah inaad iigu soo dirto boostada soo socota iyadoo mowduuca «Keen orthophoto ka Google Earth illaa AutoCAD»